Wararka Archives | YoobsanNews.com
Waxaa goor dhawayd Rasaas xoogan oo la is dhaafsanayo laga maqlay magaalada Nairobi gaar ahaan halka laga galo Tawnka Magaalada. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya iska hor imaadkan oo u muuqda Rasaas la is waydaarsanayo. Warar hordhac ah oo soo gaaray xafiiska Yoobsannews.com ayaa sheegaya in iska hor imaadkan uu u dhaxeeyo Kooxo hubeysan iyo Ciidamada amaanka kenya. ...
Taliban ayaa diyaar u ah inay xabad-joojin 10 maalmood ah la gaaraan ciidamada Mareykanka, haddii ay heshiis ay la gaaraan wada-xaajoodayaasha Mareykanka ee ay wada-hadalka kula leeyihiin Doha. Taliban ayaa sidoo kale diyaar u ah inay yareeyaan rabshadaha ka dhanka ah ciidamada Afghanistan, islamarkaana ay wada-xajaood la yeeshaan saraakiisha dowladda Afghanistan. Haddii heshiis noocan ah la gaaro, waxay dib ...
Wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, ayaa sheegaya in Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ay doorteen Guddoomiye cusub oo uu yeelanayo Baarlamaanka Labaad ee Maamulkaas. Kursigaas oo ay ku tartameyn labada Musharax ee kala Dr. Maxamed Nur Gacal iyo Cabdinasir Aaden Cismaan ayaa waxaa ku guuleystay Dr. Maxamed Nur Gacal oo ah Musharixii ay wadatay Dowladda Soomaaliya. Guddoomiyaha ...
Saameynta milateri ee dalka Turkiga ayaa sanadihii dambe aad loo dareemay, waxaan ugu dambeeyay ciidamada Turkiga uu u diray dalka Libya iyo kuwii kasii horeeyay ee hawlgalka ku fuliyay waqooyiga dalka Suuriya. Turkiga oo sidoo kale kamid ah ciidanka Gaashaanbuurta NATO, saldhig aad u ballaaranna ku leh magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ayaa wargeyska the Global Fire power oo ah mid ...
Xili caalamka uu ka jiro tartan dhinaca horumarka dhaqalaha hubka iyo siyaasada ah ayaa waxaa la soo bandhigay dalalka uu aad u korayo awoodooda dhinaca Milatariga. Wargeyska the Global Fire power oo ah mid wax ka qora arrimaha milateriga caalamka waxaa uu ku qiimeeyay in uu yahay ciidanka ugu awoodda badan bariga dhexe. Awoodaha caalamka ee dhinaca milatariga ayaa waxaa sanadihii ...
Isabel dos Santos, oo ah haweeney u dhalatay Angola, taajirna ah oo sheegtay inay u tartamayso xilka madaxweynenimo ee dalka Angola.
. Isabel dos Santos, oo ah haweeney u dhalatay dalka Angola, ahna haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika ayaa sheegtay in ay dooneyso in ay u tartanto xilka madaxweynenimo ee dalka Angola. Haweeneydan oo hataan loo heysto fadeexo musuqmaasuq ayaa waxaa dhalay madaxweynihii hore ee dalka Angola José Eduardo dos Santos, kaas oo Angola xukumayay 38 sano. Xafiiska dacwad oogaha ...
Madaxweynaha Puntland oo si diiran ugu soo dhaweeyay Boosaaso, madaxweynaha Jubbaland..
Madaxweynaha Puntland dowladda Siciid Cabdullahi Dani mas’uuliyiin kala duwan iyo boqolaal dadweyne ah ayaa madaxweynaha kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Boosaaso. Shir ay Saxaafada u qabteen labada madaxweyne soo dhawaynta kadib ayuu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullahi Deni ka sheegay in ay tahay maalin weyn oo madaxweynaha Jubbaland uu booqasho taariikhi ah ku yimid Boosaaso taas oo cadayn u ah iskaashiga ...
Muwaadin Somali ah oo xalay lagu dilay Magaalada Cape Town ee Caasimadda Koonfur Afrika
Wararka ka imaanaya Dalka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegayaan in magaalo ka tirsan dalkaas lagu dilay Muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ah dadka ganacsiga ku leh dalkaasi. Dilkaan ayaa waxaa uu ka dhacay Magaalada Cape Town ee Caasimadda Koonfur Afrika, waxaana Muwaadinka Soomaaliyeed falkaas u geystay kooxo hubeysan oo burcad ahaa. Sdoo kale Kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu Magacaabi ...
Dawladda Djibouti oo si rasmi ah uga hadashay bayaankii dhawaan ka soo baxay shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP-World
Dawladda Djibouti ayaa si rasmi ah uga hadashay bayaankii dhawaan ka soo baxay shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP-World oo sheegtay in ay mar kale ku guulaysteen dacwad kala dhexaysay dawladda Djibouti, oo ay qaadaysay maxkamad ku taala magaalada London. Dacwaddan ayaa qayb ka ah dacwado ka horeeyay oo ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka Britain kadib markii ...
Duqayn lagu dilay saraakiil shabaab ah oo ka dhacday magaalada Kunyo Barrow ee Gobolka Shabeellda Hoose
Wararka ka imanaya Shabeellda Hoose ayaa sheegaya in duqayn cusub ay ka dhacday nawaaxiga magaalada Kunyo Barrow ee Gobolka Shabeellda Hoose. Ilo ku dhow dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in duqayntan lala beegsaday laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo weerarka lagu dilay, sida ay muujinayso xogta laga helay ilaha dawladda. Xubnaha la bartilmaameedsaday ayaan weli la aqoonsan. ...